Barlamaanka iyo xukuumadda | Samfunnskunnskap.no
Golaha shacabka ee Norwey waxa la yidhaahdaa Stortinget. Golaha shacabka waxa fadhiya 169 xildhibaan oo dadku doortaan afartii sannoba mar. Waxay metelaan xisbiyo siyaasadeed oo kala duwan. Golaha shacabku waa awooda qaranka ee Norwey ugu sareysa
Kuwan waa hawlaha ugu muhiimsan ee baarlamaanka:
Iney ansixiyaan sharciyo cusub iyo in ay bedelaan sharciyo hore..
ansixiyaan miisaaniyadda qaranka
Ilaaliyaan xukuumada iyo maamulka qaranka
Ka doodaan arrimaha siyaasada iyo mashaariicda waaweyn
Doodaha siyaasada ee baarlamaanku way u furanyihiin dadweynaha. Dhammaan cidii rabta goobjoog bay ka noqon kartaa oo dhegeyssan kartaa marka siyaasiyiintu doodayaan. Laakiin dadweynuhu ma hadli karaan ama fikir kama dhiiban karnaa kiisaska lagaga doodayo baarlamaanka. Su’aalo ayaa la weydiin karaa xildhibaanada golaha shacabka iyada oo loo diri karo warqad ama e-mayl. E-maylada dhammaan xildhibaanada golaha shacabka iyo macluumaad dheeraad ah waxaad ka helaysaa stortinget.no.
Doorashada baarlaamka kadib waxay hal xisbi ama dhawr xisbi sameeyaan xukuumad cusub.
Xukuumaddu waxay ka koobantahey wasiiro (hogaamiyaha siyaasada ee wasaarad kasta) iyo raysal-wasaaraha.
Mid ka mid ah shaqooyinka xukuumaddu waa inay soo jeediso sharciyo cusub iyo bedelka sharciyada, laakiin baarlamaaka ayaa ansixinaya sharciya iyo bedelka sharciyada.
Waa shaqada xukuumadda inay hirgeliso kiisaska uu ansixiyey baarlamaanku. Sidoo kale waxay dawladu sannad walba soo jeedisaa miisaaniyada dalka.
Jimce kasta waxay xukuumaddu la kulantaa boqorka. Waxay wasiiradu boqorka u soo bandhigaan kiisas siyaasadeed oo kale duwan. Kulanada noocan ah waxa loo yaqaan wadatashi dawladeed (statsråd). Boqorka awooddiisa siyaasadeed way yar tahay, laakiin hadana kulamada noocan ahi waa muhiim.
Markay dhowr xisbi isla shaqeeyaan si ay u soo dhisaan xukuumad waxa la yidhaahdaa dawlad wadaag (koalisjonsregjering). Haddii xisbiga ama xisbiyada dawladu marka la isku daro ay u badan yihiin barlamaanka waxa la yidhaahdaa dowladda aqlabiyadda (flertallsregjering). Taas lidkeeda waxa la yidhaahdaa dowladda laga tirada badan yahay (mindretallsregjering), haddii xisbiga ama xisbiyada dawlada soo dhisayaa ay baarlamaanka ku leeyihiin xildhibaano ka yar kalabadh.
Dhammaan xukuumadaha Norwey ee sannadihii ugu dambeeyey waxay ahaayeen dawlad wadaag.
Mabda’a awood qaybsiga:
Mabda’a awood qaybsiga macnihiisu waa in baarlamaanka, xukuumadda iyo maxkamaduhu ay qaybsadeen awoodda iyagu.
Mabda’a awood-qaybsigu wuxuu qaybiyaa awoodda u dhaxaysa saddex awoodood oo kala madaxbannaan:
Hay’adda sharcidejin – baarlamaanka, oo soo ansaxiya sharciyo.
Hay’adda fulinta – xukuumadda, waxa ay soo jeedisaa sharciyo waxaanay damaanadqaadaa in ay bilowdo oo fuliso.
Hay’adda garsoorka – maxkamadaha, oo xukunta kiisas la taaban karo.